Bisad bac cawska kartoo dawayn bac baakadaha
Boorsooyinka cawska bisadda waxaa loo isticmaalaa in lagu hayo cawska bisadda. Cabirka bacaha cawska bisadu waxay ku saleysan yihiin awoodda bacaha. Waxyaabaha ugu badan ee loo isticmaalo bacaha cawska bisadda waa PET / PE ama BOPP / PE. Marka loo eego shuruudaha dusha sare ama dhalaalaya, dooro BOPP ama PET siday u kala horreeyaan. Waxaan sidoo kale ku dari karnaa naqshadda daaqadda shandadda, Waxay u oggolaaneysaa macaamiisha inay si caqligal ah u ogaadaan waxa bacda ku jira.
Waa maxay bacda baakadaha lagu duubo?
Bisadaha qaar waxay caado u leeyihiin cunista cawska. Sababta caado-dhaqameedkan lama midayn. Mid ka mid ah aragtida ayaa ah in bisaduhu ay cunaan caws si ay u kaabaan niacin; aragti kale oo ah in bisaduhu ay cuni doonaan cawska qaarkood si ay u daaweeyaan cudurada. cawska qaar ayaa laga yaabaa inay gacan ka geystaan ​​ka saarista timahaas ama dulinkan. Bisaduhu maahan kuwo ku xeel dheer cunista cowska bisadan. Cows badan oo nadiif ah oo jilicsan ayaa la cuni doonaa. Marka caws kasta oo bisadaha loo yaqaan waxaa loo yaqaan caws bisad. Caws bisadu waa shay ay waajib tahay in la haysto oo aan la iska indhatiri karin! Noocyada cawska bisadaha caadiga ah waxaa ka mid ah qamadiga, setaria viridis iwm.
Bacda caws bisadu waa bac loo isticmaalo in lagu hayo caws bisadda. Baaxadda boorsadu way kala duwan tahay hadba inta ay le'eg tahay. Qalabka inta badan loo isticmaalo bacda cawska waa PET / PE ama BOPP / PE. Marka loo eego shuruudaha dusha sare ama dhalaalaya, dooro BOPP ama PET siday u kala horreeyaan. Waxaan sidoo kale ka sameysan karnaa naqshadda daaqadda bacda, Waxay u oggolaaneysaa macaamiisha inay si caqligal ah u ogaadaan waxa bacda ku jira.
Haddii shuruudaha tayada bacda ay ka sareeyaan, oo shuruudaha qoyaanka, oksijiinta, iyo iska caabinta iftiinka ay ka sarreeyaan, waxaan guud ahaan kugula talineynaa in lagu daro lakab aluminium qalin ah oo dhexda ku jira, oo ka qurux badan kana horumarsan. Dabcan, macaamiisha qaar waxay ubaahan yihiin aluminium saafi ah si ay si buuxda u xayiraan iftiinka, oksijiinka iyo qoyaanka, laakiin qiimaha ayaa ka sareeya. Sidee loo kala saaraa in lakabka lacagta ee dhexda ku jiraa uu yahay aluminium ama aluminium saafi ah? Waa wax aad u fudud. Kaliya geli isha iftiinka bacda dhexdeeda. Haddii aad arki karto dhibcaha iftiinka ee kore ee bacda, waa aluminium-dahaadh. Haddii aadan arki karin barta iftiinka, aluminium saafi ah ayaa la isticmaalaa.
Macaamiisha qaar waxay doorbidaan inay isticmaalaan warqad gacmeed si ay u sameeyaan bacaha, kuwaas oo umuuqda kuwo horumarsan oo qurux badan.
Si boorsadu u noqoto mid dib loo isticmaali karo, waxaan badanaa ku darnaa siib si aan u furno una xirno furitaanka bacda si isdaba joog ah. Furitaanka kadib, waqtiga keydinta alaabada wali waa la kordhin karaa.
Si looga caawiyo macaamilka ugu dambeeya inuu si fudud u furo bacda, waxaan guud ahaan ku darnaa ilmo jeexjeexan meel ka hooseysa meesha wax lagu xirto iyo ka sareysa jiinyeerka.
Marka la eego naqshadda midabka ee boorsada, waxaad u qaabeyn kartaa midabka iyo qaabka sida aad u kala jeceshahay. Mashiinkayaga daabacan ee 9-ka midab ah ayaa soo celin kara midabka aad rabto heer sare.
Hore: Cunto eyga Cunto xayawaan Beyin oo xirxiraya boorsada baakadaha cuntada
Xiga: Bac suugo kartoo jumlada warshad Shiinaha
Bacda Cuntada Bisadda
bisadaha soo saaraha bacaha cuntada ee Shiinaha
Dib-u-warshadaynta Bisadda Bisadda
Bacda bisada lagu daaweeyo
bisad dawee warshadda bacaha
bisad ku daweeya bacaha jumladaha Shiinaha
Funaanado cad oo istaaga boorsooyinka
Melarka Meel istaag
Dambiisha istaag Ziplock Daad
Bacda Qashinka Bisadda loo habeeyay
Boorsada fidsan ee boorsada cuntada kalluunka
Cunto eyga Cunto xayawaan Beyin oo xirxiraya boorsada baakadaha cuntada
Bacda cunnada eyda leh ee tayo sare leh